दुखद खबर : मलेसियामा एकै कम्पनीमा काम गर्ने दुईजना नेपालीको मृत्यु !! हार्दिक श्रद्धाञ्जली – ramechhapkhabar.com
क्वालालम्पुर, ३१ भदौं ।
मलेसियामा कोरोना भाइरसको सक्रमणवाट एकै कम्पनीमा कार्यरत दुईजना नेपाली श्रमिकहरुको ५ घण्टाको समयावधिको फरकमा मृत्यु भएको छ।
दार्चुला कौटे घर भई मेलेसियाको केलागमा रहेको एक सेक्युरिटि कम्पनीमा कार्यरत ४६ वर्षिय प्रेम सि वडालको गए राती मृत्यु भएको हो।
करीव ९ वर्ष देखि मलेसियामा कार्यरत वडालमा सेक्टेम्वर १ तारिखमा सक्रमण पुष्टि भएको थियो । चार दिन अगाडि मात्रै केलाग अस्पतालमा भर्ना भएका वडालको गएराती मृत्यु भएको हो ।
वडालको परिवारमा श्रीमती एक छोरा र एक छोरी रहेका छन । परिवारहरु सवैजना दार्चुलावाट हाल महेन्द्रनगरमा वस्दै आएका छन ।
यसैगरी कोरोना सक्रमणवाट नै वुधवारको दिन विहानको समयमा धादिङका ४७ वर्षिय हर्क वहादुर घलेको मृत्यु भएको थियो। हर्कपाचँ वर्ष देखि मलेसियामा कार्यरत थिए । दुवैजना विजीएस सेक्युरिटि कम्पनीमा कार्यरत रहेका थिए ।
वैदेशिक रोजगारीको क्रममा मलेसियामा कार्यरत झापा मेचिनगरका-३ स्थायीबासी निर्मल पोख्रेल परिवार बाट सम्पर्क बिहिन भएका छन।
रोजगारीको शिलसिलामा ३ बर्ष अघि मलेसिया आईपुगेका निर्मल गत जुलाई ६ तारिक बाट एकएक सम्पर्क बिहिन बन्न पुगेका हुन।
मलेशियामा अवैधानिक तबरमा रहेर सुरक्षागार्ड कम्पनिमा काम गरीरहेका पोख्रेल सम्पर्क बिहिन बन्न पुगेपछि परिवारमा चिन्ता बढेको छ। १७ बर्ष अघि इन्डोनेसियाली महिला अनि सङ लगनगाठो कसेका पोख्रेल र अनिको एक छोरा समेत छन, भने बिबाह दर्ता समेत रहेको छ।
करिब ३ महिना यता निर्मल आफ्ना आफन्त साथी भाइ कोहि संग पनि सम्पर्कमा नरहेको उनकी श्रीमती अनि पोख्रेलले बताईन।अनि हाल झापा मेचिनगरमै निर्मलको फोन कुरेर बसिरहेकि छिन।
कोरोना भाईरसले गर्दा घर ब्याबहार चलाउन एकदम समस्या छ। कमाउन गएका मान्छेले खर्च नपठाई दिदा र सम्पर्क बिहिन हुदा उतिकै मानसिक तनाब बढेको छ।”अनिले फोन सम्पर्कमा भनिन ।
छोरो ८ कक्षामा पढ्दै छ बिध्यालयको फी र अध्यनका लागि आवस्यक सामाग्री किन्न खर्च छैन, निर्मल सम्पर्कमा नआए देखि पसलहरुमा उधारो सामान दिनै छाडे त्यसमाथि म इन्डोनेशियाकि छोरी परे के गर्ने कसो गर्ने? माइत फर्कौ भने कुनै बाटो छैन।’उनले थपिन ।
यदी कुनै दुर्घटनामा परे भने यत्रो दिन सम्म खबर पाउनुपर्ने, तर केहि खबर पनि छैन ? सङै काम गरेका साथिहरु लाई सोधपुछ गर्दा उनिहरु पनि निर्मल पोख्रेलको अवस्थाबारे थाहा नभएको बताउछन। आखिर गए कहाँ त निर्मल ? किन एकाएक हराए निर्मल ? भन्दै रुदै प्रश्न गरिन् निर्मलको श्रिमति अनिले ।
घर परिवार संग र श्रीमान श्रीमती बिच झैझगडा र मनमुटाव त थिएन ? भन्ने हाम्रो प्रश्नमा बिबाह भए यता त्यस्तो कुनै झगडा नभएको र पारिवारिक सम्बन्ध पनि राम्रै रहेको अनिले जिकिर गरिन। र अन्तमा निर्मल पोख्रेल लाई देख्नु हुने वा भेट्नु हुनेले ९८६३९८०७११ मा सम्पर्क गराई दिन अनुरोध गरेकी छिन।